WOWOW Uxinzelelo oluphezulu lwe-5 Ukuseta i-Chrome Shower Head ene-Handheld
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iintloko zeshawari eziphathwayo / WOWOW Uxinzelelo oluphezulu lwe-5 Ukuseta i-Chrome Shower Head ene-Handheld
【Design Contemporary】 Le ntloko yeshawari ishenxisekayo enolungelelwano olufanelekileyo kunye nobunzima esandleni, uyilo lwe-ergonomic lwenza intuthuzelo ephezulu kunye nokulula ukuyisebenzisa. I-sprayface eqingqwe ngobugcisa iveza iifom ezilula, eziyilwayo ezincedisana neebhafu zangoku kunye nezincinci.
【Kulula ukucoceka kunye neAnti-block block】Imilomo yesitshizi igquma indawo yonke yeshawari, imilomo yerabha ekwaziyo ukuzicoca eyi-40 kunye nemilomo ye-ABS eyi-18, ezi jethi zokucoca i-clog ukuze zicoceke lula kwaye zithintele ukwakheka kwekalika.
【Izinto zeNkulumbuso】 Ishawara ye-ABS ye-ABS, isibiyeli kunye ne-59 ″ yombhobho wentsimbi engenakutyiwa, iyenza yomelele, ingqinisise umhlwa, ingafihli, ixhathise iminwe kunye neendawo zamanzi. I-360 ° isibiyeli esiguqukayo esilungelelanisiweyo sokulungelelanisa ii-engile kunye nezalathiso njengoko ufuna. Amandongomane ethumbu obhedu aqinileyo onxibelelwano oluthembekileyo olungavuziyo.
【Ukufakwa lula】Akukho mfuneko yokufowunela umtywini, uqhagamshelo olunye nje lokuqinisa isandla kwimizuzu ngokulandela imiyalelo inyathelo nenyathelo.Ukusebenza ngayo yonke imibhobho eqhelekileyo yeG1/2”. Qaphela:Kuqhelekile ukuva ilizwi xa ulishukumisa kukho i-impeller kwintloko yeshawari enceda ukuvelisa amanzi e-massage ngcono.
Iintloko zeshawari zifumaneka kwiindidi ngeendidi zokugqibezela kunye nezitayile, kunye noluhlu lwezinto ezitsha zokubonisa isimbo sakho sobuqu kunye nezinto ozikhethayo zeshawari.
Nika igumbi lakho lokuhlambela isimbo sexesha langoku ngentloko yeshawa ephathwa ngesandla. Uxinzelelo oluphuculweyo kwisethingi nganye ye-5 ivumela amava abalaseleyo okuhlamba rhoqo.
Ukuphuculwa kwesakhiwo sangaphakathi kunika uxinzelelo olunamandla kunye nokuhamba okuphezulu ukufumana ishawa esimnandi nakwindawo ephantsi yoxinzelelo lwamanzi kunye neemeko zokuhamba.
Isibiyeli esinokulungelelaniswa ngaphezulu kwe-engile, ibhola ehlengahlengiswayo edibeneyo ijikeleziswa ngokulula ngama-360 ° ukukhomba umbono wakho weshawari yokutshiza entloko.
Imilomo yerabha eguquguqukayo engama-40 ekwaziyo ukuzicoca kunye nemilomo ye-ABS eyi-18, ethambileyo, enobuntu kwaye kulula ukuyicoca. Unokucoca imilomo ngokucinezela ngobumnene ngeminwe yakho.
SKU: H5010C iindidi: Iintloko zeshawari eziphathwayo, Shower Imibhobho
9.53 x 6.42 x 3.19 intshi
I-Chrome Plated Premium ABS Body,Stainless Steel Hose